Ubunini bendawo yaseMacambini buyinkilibathwa - Bayede News
Izakhamuzi zaseMacambini ziyawusola umgqakazo ofuna ukuba yimpindamshaye
KUFUFUSA olunye udungunyane esizweni saseMacambini eNyoni ngaphansi kwenkosi uMthokozisi Mathaba ozalwa yinkosi eseyakhothama uKhayelihle Mathaba. Lokhu kwakamuva kufaniswa ncamashi nalokho okwake kwasusa umsindo kwacishe kwashisa izwe eminyakeni eyedlule lapho le ndawo engasogwini yayinombango phakathi kobukhosi, uHulumeni waKwaZulu-Natal kanye nosomabhizinisi baseDubai. Okwakamuva kususwa izinkulumo ezithi umhlaba obekwaziwa ukuthi ungowesizwe kuthiwa usuwathengiselwa umndeni othize wamaphumemile. Igula leli kuthiwa liqhunyiswe yikhansela lendawo uMnu uWelcome Mthethwa nokuthiwa wazise umphakathi waseMhlubulweni ukuthi awukhohlwe yizindlu zomxhaso ngoba indawo ingaphansi komlimi omhlophe. Ngokomlando kuvela ukuthi lo mhlaba okukhulunywa ngawo ungaphansi kwesizwe saseMacambini.
Umlando uyaziphinda ngoba nangonyaka wezi-2008 ukukhuluma kwakumayelana nokuthengiselana komhlaba umphakathi owafunga wagomela ukuthi kuyokwenzeka wonke sewendela koyisemkhulu. Ababenukeka lapha akubona nje osomabhizinisi laba baseDubai kepha kuthiwa kwakukhona namahalanjonjo akhona endaweni kanye namanye asebenza kuHulumeni ayesebone ukuthi azosika ivenge ngale “ntuthuko mbumbulu yabaseDubai”.
Okwabe kununuselwa ngakho lapha kwakuyimali elinganiselwa ezigidigidini ezingama-R44 (R44bn) eyabe phakathi kokunye izokwakha inxanxathela yezitolo, amahhotela agudle ulwandle nezindawo zokuphumula nezokugcebeleka. Okwanenga umphakathi kwaba wukuvela kwezindaba zokuthi le ntuthuko enkulukazi izokwenzeka inqobo nje uma imindeni nemizi ethile izogudluzwa. Lesi siphakamiso sachithwa ngoba kwabe kusho ukuthi izindawo ezifana namathuna nazo zizothinteka. Omunye wezakhamuzi okhulume neBAYEDE, uMnu uNtobeko Nxele uthi okuxakayo uMnu uMthethwa akalidalulanga igama lalo mlimi omhlophe osekuthiwa ungumnikazi wendawo.
Inkosi uMthokozisi Mathaba oyindodana yenkosi endala uthi kuncane lokhu ngoba kuzwakala nokuthi impela kuyazitatshelwa ezweni laMakhosi. Uveze ukuthi kukhalwa eMhlubulweni nje kukhona nezinye izindawo. “Kusanda kuvela futhi ukuthi nendawo yasoHwebedeni nayo obekumele kwakhelwe kuyo umphakathi izindlu zomxhaso ukuthi ingaphansi komlimi omhlophe naye futhi ongagagulwanga ngegama. Kuyaxaka lokhu okuvela nezikhulu zikaHulumeni ngoba mina ngazi ukuthi lezi zindawo zingaphansi kwesizwe saseMacambini,” kusho uMcambi.
Uqhube wathi ngenxa yale ndida esiqalile esizweni ngonyaka odlule baphoqeleke ukuba babize umhlangano ophuthumayo nezikhulu zikaMasipala, ezoMnyango Wezokubusa Nokubambisana KwaZulu-Natal kanye nezikhulu ze-Ingonyama Trust Board (ITB) okuyihhovisi elibhekelele umhlaba weNgonyama ukuba kuzobhungwa ngale mpicabadala esiqubukile yobunini balo mhlaba. “Zontathu lezi zinhlaka zigcine zethembise ukuthi zizobuya maduze nezimpendulo, kodwa kuze kube manje akukabuyi muntu. Le nto izosusa uthuthuva esizweni oluzofana nalolo olwenzeke ngodaba lwaseDubai ngoba akukwazi ukuthi umphakathi usuhlale kulezi zindawo ngaphezu kweminyaka engama-50 bese kuthiwa indawo ngeyamaBhunu. Kahle kahle ngibona sengathi kuvuka isinyelela indaba yaseDubai. Kukhona umkhonyovu owenziwayo ngalolu daba.”
UMcambi uthi sebenxuse noMasipala iMandeni ukuba ubaphenyele ngokushesha ngobunini balezi zindawo: “Namanje izikhulu lezi azikabuyi nezimpendulo. Thina sifuna ukwazi ukuthi kushiwo ngani ukuthi lezi zindawo zingaphansi kwabalimi abamhlophe. Isizwe sithukuthele ngale nto. Sifuna ukwazi ukuthi ngoba laba balimi abamhlophe osekuthiwa bangabanini balo mhlaba. Futhi sifuna basivezele namatayitela,” kuphetha uMcambi.
IBAYEDE ibe isikhuluma neKhansela uMthethwa nokuqinisekisile ukuthi luphazamisekile uhlelo lokwakhiwa kwezindlu ngenxa yokuthi bathole ukuthi ingxenye enkulu yomhlaba oseMhlubulweni ogudle ulwandle okuyindawo ebuye yaziwe ngokuthi kuseMantshangula kuvela ukuthi ngeyomlimi owayebizwa ngokuthi nguLoshi kodwa osewashona. “Ngesikhathi ngibuza emphakathini kwavela ukuthi kwasayena lo Loshi ndini akusiyo eyakhe indawo kodwa wafika endaweni kusaphethe uHulumeni wobandlululo. Kuthiwa walethwa kule ndawo yizikhulu zakwaGG ezofuya izinkomo,” kusho uMnu uMthethwa.
Ikhansela lithe ngokwazi kwalo ngesikhathi sekuphethe uHulumeni wakwaZulu, indawo yabuyiselwa enkosini uBhekamafa Mathaba onguyise wenkosi uKhayelihle. “Okuxakayo asazi ukuthi sekwenzeka kanjani ukuthi le ndawo bese kuthiwa ingeyalomlungu obizwa ngoLoshi ngoba inkosi uBhekamafa Mathaba beyakhise abantu bayo kuyo futhi kungamadlelo ezinkomo. Abanye abantu bazalelwa kuyo le ndawo.”
Ukuvumile futhi ukuthi nendawo yasoHwebedeni nayo inenkinga efanayo neyaseMhlubulweni njengoba nakhona sekuvele ukuthi ngeyomlimi omhlophe. “Khona-ke anginayo imininingwane ngomnini wayo kodwa ungabuza kuMeya uZulu ngoba bona kade bahlala ebukhanseleni,” kuzihlangula uMthethwa.
UNobhala Wekomiti letrust yomphakathi iBhekamafa Community Trust, uMnu uSipho Prince Dube uthe le ndawo yaseMhlubulweni akuseyona ekaLoshi ngoba uHulumeni wobandlululo wabuye wayithengela umphakathi owawususwe eMangethe wayolahlelwa eWangu ngowe-1976. Indawo yaseWangu kwakuyindawo eyayihaqwe yisifo sochoko. “Kuthe ngowe-1978 uHulumeni le ndawo wayithengela umphakathi owawuhlaliswe eWangu. Nami abazali bami bangabanye ababehlaliswe eWangu. Ngakho kuyadida ukuthi le ndawo sekungekaLoshi kanjani ekubeni wakhokhelwa nguHulumeni ngayo.”
Ebuzwa usihlalo we-ITB, uMehluleli uJerome Ngwenya uthe yena ubenganalwazi lokuthi sekuqubuke umbango ngobunini bomhlaba eMacambini. “Akukho mbiko engiwaziyo owalethwa eHhovisi kodwa ngisazophenyisisa khona bese ngibuyela kuwe nezimpendulo,” kusho uMehluleli uNgwenya noqhubeke wathi, “Kukhona okushaya amanzi ngalolu daba kodwa ngisazoke ngibuze eHhovisi lethu ngoba bengingenalo ulwazi ngiqala ukuluzwa ngawe lolu daba. Ibucayi le nto okukhulunywa ngayo,” kuphetha uMehluleli uNgwenya.
Bayede News Jan 20, 2017